5 सर्वश्रेष्ठ शहर युरोप मा धन्यवाद लागि भ्रमण गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5सर्वश्रेष्ठ शहर युरोप मा धन्यवाद लागि भ्रमण गर्न
धन्यवाद सधैं परिवार वरिपरि परिक्रामी धेरै परम्परागत छुट्टी भएको छ, टर्की, र फुटबल. तथापि, जो यात्रा आनन्द र द्रुत Getaway प्रयोग गर्न तपाईं बीचमा ती युरोप मा धन्यवाद लागि भ्रमण गर्न यी सर्वश्रेष्ठ शहर मध्ये यस वर्ष छुट्टी सिजन खर्च विचार गर्नुपर्छ.
पुरानो महादेशमा धन्यवाद लागि भ्रमण गर्न सर्वश्रेष्ठ शहर छ. तापनि युरोप को सम्पूर्ण महादेशमा प्रभावशाली छ, शहर मात्र एक जोडी चयन धन्यवाद लागि भ्रमण गर्न साँच्चै शानदार छन्.
युरोप सामान्यतया पर्यटकहरु संग overcrowded छ, तर एक लेट नोभेम्बर त्यहि भन्न सक्दैन. वर्ष को यो भाग किन पुरातन शहर ठूलो खाद्य र आश्चर्यजनक गिरावट रंग संग धन्यवाद परम्परा भ्रमण र पुन: सिर्जना गर्न सही समय हो भनेर हो.
तपाईंलाई अमेरिकी वा युरोपेली हुनुहुन्छ, शहर को निम्न सूची धन्यवाद र आसपास आफ्नो शीर्ष गन्तव्यहरू हुनुपर्छ.
धन्यवाद लागि हामी छानिएको भ्रमण गर्न सर्वश्रेष्ठ शहर हाम्रो यात्रा सुरु गर्न – प्रयोग, बेल्जियम
यो छोटो राख्न, ब्रुग्स एक वास्तविक जादुई शहर हो केही पुराना कहानी देखि सीधा आ. स्वाभाविक, पुरानो शहर जहाँ सबै सौन्दर्य झूट छ. यो मध्यकालीन युग देखि सीधा आउछ, र यहाँ तपाईं पुरातन र mesmerizing भवनहरु धेरै पाउनुहुन्छ.
तिमी सक्छौ एक डुङ्गा सवारी लिन शहर गरेको काल्पनिक नहरहरुमा मार्फत र सबै पत्ते छोपेको भवनहरु मा आश्चर्य मा हेर्न. अरु के छ त, किनभने यो नोभेम्बर छ, सबै कारण सबै सुन्दर गिरावट रंग अतिरिक्त dreamlike देखिन्छ.
तपाईं युरोप मा धन्यवादको लागि ब्रुग्स गएर गलत जान सक्छ. तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो शहर एक रेल मा हप सारा अनुभव अतिरिक्त अविश्वसनीय बनाउन! and we are sure as soon as you complete your holiday, तपाईं यो साझा हुनेछ5युरोप ब्लग पोस्ट मा धन्यवाद लागि भ्रमण गर्न सर्वश्रेष्ठ शहर.
रोट्टरड्याम ब्रुग्स गाडिहरु गर्न
ब्रुग्स गाडिहरु गर्न UTRECHT
ब्रुग्स गाडिहरु गर्न हेगुइ
एनorway चिसो उत्तर मा टाढा छ, तर ओस्लो को मा शुक्र छ देश को दक्षिणी भागमा. शहर अझै चिसो मौसम प्रेम गर्नेहरूका लागि एउटा सिद्ध गन्तव्य यसरी छ तर नर्वे को shivering सर्दी लाग्न सक्दैन.
ओस्लो वर्ष को यो भाग कारण सबै साँच्चै मनोरम छ जादुई पतन दृश्यहरु. प्लस, तपाईं हेर्न प्राप्त उत्तरी रोशनी जो सबै भन्दा राम्रो यो देशमा देखेको छन्, त्यसैले थप एक व्यक्ति आवश्यक सक्छ के?
तपाईं खाना को परम्परागत धन्यवाद प्रकार तपाईं प्रयोग गरिरहनु भएको फेला पार्न सक्छ, तर तपाईं प्राप्त अनुभव यो मूल्य भन्दा बढी छ. तपाईं चाहनुहुन्छ चाहन्छु रूपमा तापनि मेनु छैन रूपमा विविध छ, प्रदान गर्न Norwegians अझै पनि रोमाञ्चक भोजन को धेरै छ. उदाहरणका लागि, पछि एक परम्परागत नर्वेजियन hotdog छ. तथापि, यो मासु स्टक मा पकाएको र र्याप गर्नुपर्छ lefse, एक flatbread पीठो बनाइएका, आलु, र दूध.
आश्चर्यजनक सार्वजनिक पार्क र वाइकिंग पुरानो fortresses देखि संग्रहालयहरु, तपाईं एक हुनेछ ओस्लो मा गर्न धेरै. हामीले यो भव्य शहरमा केही दिन भन्दा बढी खर्च गर्न चाहनुहुन्छ छौँ पक्का हो.
Oslo is our most north pick for5युरोप मा धन्यवाद लागि भ्रमण गर्न सर्वश्रेष्ठ शहर.
तपाईं संभवतः लन्डन छोड्न सक्दैन. सबैलाई यसको बारेमा सुने छ, र सबैलाई यो प्रेम. के राम्रो छ, तपाईं गिरावट मा प्रेम पर्नु छौँ. शहर विशाल छ, तर offseason त्यहाँ जा सामान्यतया केही भ्रमण गर्न सिद्ध समय छ भीड स्थानहरू.
प्रशस्त घटनाहरु के को यो समय मा यो वर्ष, तपाईं एक गतिविधिहरु प्रशंसक हुनुहुन्छ भने त, तपाईंलाई मनपर्ने छौँ लन्डन. यसबाहेक, यस पार्क शरद ऋतु मा आश्चर्यजनक बढी छन्. केंसिंग्टन गार्डन, ग्रीनविच पार्क, र विंडसर ठूलो पार्क धेरै प्रकृति स्वर्गको केही तपाईंले भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ छौँ छन्.
खाना विचार भनेर ती धन्यवादको एक आवश्यक भाग हुने, तपाईं लण्डन आफ्नो उचित भाग हुनेछ. खाना यहाँ दृश्य प्रभावशाली र रूपमा राज्य अमेरिका मा एक प्रमुख शहर फिर्ता रूपमा विविध छ. त्यहाँ सबैको स्वाद को लागि केहि हुनेछ.
लन्डन यात्रा बारेमा सबै भन्दा राम्रो भाग त्यहाँ कन्टिनेन्टल देखि जाने धेरै प्रसिद्ध रेल लाइनहरु छ लन्डन युरोप, बाट व्यक्तिहरूलाई जस्तै एम्स्टर्डम, पेरिस, र बर्लिन, जो सबै देहात घुमफिर र मार्फत पारित एक भव्य अनुभव प्रदान Eurotunnel अंग्रेजी च्यानल मुनि वा फ्रान्सेली कल यो रूपमा - ला Manche.
तपाईं पक्कै पनि थाहा स्विट्जरल्याण्ड, र यो जादुई पहाड छ, तर तपाईं सम्भवत Lugano सुनेका छैन. यो स्विट्जरल्याण्ड को दक्षिण मा एक भव्य सहरको, इटाली संग सिमाना नजिक.
शहर एक mesmerizingly नीलो को किनारा मा छ आल्प्स को तल ताल, जो लगभग जादुई सुनिन्छ. त्यो वास्तवमा एक्लै तपाईं सही त्यहाँ युरोप मा आफ्नो धन्यवाद खर्च गर्न प्राप्त गर्न पर्याप्त हुनुपर्छ, Lugano is our most unique pick in Best Cities to Visit for Thanksgiving.
यसबाहेक, र यो शहर रेल मार्फत बाट यात्रा यसको आफ्नै एउटा हडताली अनुभव छ. त्यो शायद युरोप को सबै भन्दा आश्चर्यजनक क्षेत्रहरु मध्ये एक को सौन्दर्य रमाइलो गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो. यसबाहेक, तपाईं किनभने को यात्रा रमाइलो छौँ शानदार रेल आफूलाई, रूपमा स्विस को को एउटा छ युरोप सबैभन्दा गुणस्तर रेल.
बेसल Lugano गाडिहरु गर्न
Lugano गाडिहरु गर्न बर्न
ल्यूसर्न Lugano गाडिहरु गर्न
ज्यूरिख Lugano गाडिहरु गर्न
हामी संभवतः रोशनी को अनन्त शहर छोड्न नहीं उठयो. पेरिस सधैं एउटा कारण लागि संसारमा सबैभन्दा भ्रमण शहर मध्ये एक छ. तथापि, यो लेट नोभेम्बर किन भ्रमण गर्न सही समय छ अक्सर तरिका पनि जो भीड गर्नुपर्छ. प्लस, तपाईं spellbinding गिरावट रंग आपत्ति छैन.
अरु के छ त, नोभेम्बर मा पेरिस एक Instagramers लागि स्वर्ग. तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ गर्दा तस्वीर लिइरहेको रोक्न सक्ने छैनन्. कमसेकम, कि के तपाईं सधैंभरि सम्झना छौँ जो एक यात्रा प्राप्त सुनिश्चित गर्नेछ.
खाना लागि जाँदा, राम्रो, यो फ्रान्स कसरी तपाईंलाई थाहा; र साथै, पेरिस छ मासु संसारको राजधानी. यसरी धन्यवादको Recreating धेरै सजिलो हुनेछ, र तपाईं यसलाई एक चम्कने बस्तु थप्न मौका प्राप्त. अरू कि कहीं गर्न सक्षम हुने छैन. मात्र पेरिस खाना र पनि pickiest यात्री astonish भन्ने पर्यटन प्रस्ताव.
यस साहसिक राम्रो गर्न सक्ने मात्र कुरा हो एक रेल समातेर र फ्रान्सेली देहात मार्फत जाने. यो सबै भन्दा राम्रो अनुभव हुनेछ!
युरोप मा धन्यवाद लागि भ्रमण गर्न सर्वश्रेष्ठ शहर मा सर्वश्रेष्ठ धन्यवाद खर्च
हामी र यी शहर कुरा मा जान सक्छ. यसबाहेक, हामी बारेमा बताउन सक्छ अन्य ठाउँहरूमा पनि धन्यवाद वरिपरि आफ्नो संरक्षण योग्य. सम्पूर्ण Bavarian क्षेत्र जर्मनी, को इटाली को उत्तर मिलान संग विशेष गरी, स्कटल्याण्ड, र अधिक. युरोप मा धन्यवाद यी ठाउँहरू कुनै पनि स्मरणीय अनुभव हुन सक्छ.
जहाँ अन्त मा जाने निर्णय, तपाईं विचार गर्नुपर्छ रेल द्वारा यात्रा. जस्तै हामी भने धेरै पटक, यी ठाउँहरू केही तपाईं साँच्चै पूरा अनुभव दिन छैन तपाईं रेल द्वारा तिनीहरूलाई भ्रमण नभएसम्म. त्यो बाटो मात्र तपाईं साँच्चै युरोप जादु अनुभव गर्न सक्षम हुनेछ. सम्पर्क बचत एक ट्रेन to get your tickets as soon as possible because Thanksgiving is almost here!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-cities-visit-thanksgiving-europe/ - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml र तपाईं / यो / डे परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ वा / fr र अधिक भाषा.
europetravel लन्डन longtrainjourneys धन्यवाद रेल यात्रा रेल यात्रा ट्राभेलबिजियम travelfrance travelnorway यातायात स्विट्जरल्याण्ड